ARCORA njikọ njikọ nwoke nwanyị anwụrụ - arcorarobinet
Welcome / ngwa / Foset ngwa / ARCORA mgbata mgbata Nwoke Nwaanyị
ARCORA Kpatụ njikọ Nwoke Nwaanyị
Igwe mmiri ọkpọkọ njikọta dị mfe iji wụnye ma nwee ike idozi ya otu onye. Ngwunye mgbochi na-egbochi mgbochi siri ike ma sie ike nrụrụ.
Nkọwa nke eriri mmiri braid:
Kwesịrị ekwesị maka ọkpọkọ mmiri na kichin kichin, maka iji mmiri ọkụ na mmiri oyi.
CUPC kwadoro tucai edoghi: braided naịlọn elu elu, PX n'ime ọjà, ọla okpukpu abụọ isi aku, siri ike ọla njikọ.
American ọkọlọtọ size: M10 * 1 / 9mm / 16inch n'ogologo, 500mm njikọ dayameta, ọma juru n'ọnụ na uko iji hụ na àgwà
Mfe Mfe: Solid bras connector, dị mfe iji wụnye aka ma ọ bụ na spana na nkeji.
ANAKWETA Afọ 5, Ahịa AKA: A na-enye akwụkwọ ikike afọ 5 na ọrụ ndị ahịa. Ejiri 90 ụbọchị laghachi n'efu.
Ọdịdị dị ezigbo mma, agba dị ọcha ma maa mma, ọdịdị ahụ bara uru, na nkwakọ ngwaahịa ahụ bụ ikuku. Mkpọchi ndị ahụ dị ezigbo mma, buru oke ibu, rụọ ọrụ nke ọma, enweghị ọkụ, ezi gloss, obere na ọmarịcha imewe, na imewe ahụ dị ezigbo mma Ihe osise a dị ka ọ dị oke elu. A na-eji okpu mkpuchi nwere ihe inyeaka, nke kachasị mfe ịwụnye. Ọ nwere ike na a ga-sikwuo ike na-enweghị a isi, nke bụ nnọọ ọrụ enyi na enyi!
Ihe eji esi mmiri na kichin na-adịkarị mkpa idozi akụkụ mmiri pọmpụ na mpempe akwụkwọ roba, buru ụzọ rụọ olulu mmiri oyi site na elu ruo na ala, wee jiri oghere na-enweghị oghere mechie pọmpụ mmiri ahụ na ala nke pọmpụ ahụ. klookwaisi na klọọkụ. Njikọ ahụ siri ike ma sie ike, wee mechaa njedebe nke eriri ahụ na ntanetị na ntanetị na eriri pọmpụ ahụ.
ARCORA na-ebuli mkpanaka Pop Up Lavatory Drain Black
Nnọchi raygba Isi maka ARCORA Kitchen foset, Bụrụ ezé Nickel
Nnọchi ịgba isi maka ọkpọkọ ...
Ghichaa akwa nhicha ahụ ARCORA ọla edo
ARCORA onye na-agbanwe sprayer isi maka kichin kichin maka G1 / 2 njikọ nwoke
ARCORA nnọchi sprayer isi maka ...